မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Tokyo Disney Sea 1 (သို့) ဂျပန်ခရီးစဉ် Day 4
nice view. thanks
1/31/2009 1:17 PM
ဖတ်သွားတယ်ဗျို့ ... ဂျပန်မလေးတွေပုံက ဘယ်တော့လာမှာလဲဟင်
Very good . HEND hAUNG
အောင်မယ်လေးဗျာ သူနဲ့ ဂျပန် ကို ဘလော့ဂ်ထဲက လိုက်လည်လိုက်တာ ထမင်းချက်ဖို့တောင် မေ့သွားတယ် ဟီး..။
မပြောမရှိနဲ့ Video Editing အစွမ်းကိုတော့ ရေလည် လေးစားသွားပြီ..။ လက်လန်တယ် ... အာရို့ ;)